नेपाली श्रमिहरुको डेढ लाख युरो ठगेर फरार एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्ष कुँवर संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि बर्खास्त ! - VOICE OF NEPAL
नेपाली श्रमिहरुको डेढ लाख युरो ठगेर फरार एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्ष कुँवर संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि बर्खास्त !
२५ चैत्र २०७७, बुधबार २०:२५
नेपाली श्रमिहरुको डेढ लाख युरो ठगेर फरार एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्ष बिक्रम जंग कुँवर संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि बर्खास्त भएका छन्।
संघको आज ७ अप्रिल, २०२१ मा बसेको कार्यसमिति बैठकले ठगी कार्यमा संलग्न निज कोषाध्यक्ष कुँवरलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो।
रोकिएन एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्ष कुँवरको ठगी धन्दा : ११ नेपाली यात्रुहरु लिस्बन एयरपोर्टबाट फर्काईएपछि नक्कली टिकेट बेच्ने कोषाध्यक्ष कुँवर निलम्बित !
लामो समयदेखि ट्राभल्स र रेमिट्यान्स मार्फत ठगी गर्दै आएका एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्ष बिक्रम जंग कुँवर संघबाट निलम्बित भएका छन्।
निलम्बित कोषाध्यक्ष कुँवर लक्ष्मी ट्राभल्सका संचालक हुन्। उनि लामो समयदेखि आफ्नो सामाजिक पदको दुरुपयोग गर्दै ठगी गर्दै आएका थिए।
भोइस अफ नेपालले कोषाध्यक्ष कुँवर र उनीद्वारा संचालित लक्ष्मी ट्राभल्सको ठगि धन्दाको पहिलोपटक पर्दाफास गर्दै १३ मंसिर २०७७ मा “एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्षको ठगी काम : नेपालमा कोरोना बिरामीको उपचारमा पठाएको रकम नै पारिदिए झ्वाम् ! “ शिर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।
भोइस अफ नेपालले संघका कोषाध्यक्ष कुँवर र उनीद्वारा संचालित लक्ष्मी ट्राभल्सको ठगि धन्दा नरोकिएपछि निरन्तर फलोअप गर्दै ” पोर्चुगलमा रेमिट्यान्सको नाममा ठगी धन्दा : रेमिट्यान्सका मालिक मर्सिडिज कारमा सरर , सेवाग्राही फोटोसप रसिद लिएर महिनौ रुदै धरर !” अर्को समाचार १६ मंसिर २०७७ मा प्रकाशित गरेको थियो।
संघका कोषाध्यक्ष कुँवरले भोइस अफ नेपाल र यसका प्रतिनिधिहरुलाई समाचार हटाउन बारम्बार धाकधम्की दिदै आएका थिए। समाचार नहटाए र क्षमा नमागे जे पनि हुनसक्ने भन्दै उनले कयौ पटक भोइस अफ नेपालका प्रतिनिधि र स्वयम् पिडितहरुलाई समेत धाकधम्की दिदै आएका थिए।
पिडितहरुले संघमा कारवाहीको लागि निबेदन दिएपछि भोइस अफ नेपालले फलोअपमा ” ठगीमा संलग्न एनआरएनए पोर्चुगलका कोषाध्यक्ष कुँवरलाई कारवाहीको माग गर्दै दिए पीडितले उजुरी !” शिर्षकमा २४ मंसिर २०७७ मा अर्को समाचार सप्रेषण गरेको थियो।
संघले ठगीमा संलग्न निज कुँवरलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै बचाउदै पिडितहरु लाई उनीहरुले सामाजिक संजालमा लेखेका ठगीका गुनासाहरु मेटाउन दबाब मात्रै दिएन, जबरजस्ती मिलापत्र समेत गरेर उजुरी फिर्ता लिन लगायो।
ठगीका साथै मारपिट र गुण्डागर्दीमा समेत संलग्नता भएका कुँवरले संघको गरिमा र पदिय मर्यादाको ख्याल नै नगरी निरन्तर असामाजिक कार्यहरुमा संलग्नता भएपछि संघले गरेको निर्णयलाई भोइस अफ नेपालले २० भाद्र २०७७ मै ” एनआरएनए पोर्चुगलमा टोलेगुण्डाहरुको सकियो राज, मागे माफी – अब उप्रान्त कुनै पनि असामाजिक घटनामा संलग्न भए संघबाट स्वतः बर्खास्त हुने !” शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। आफैले गरेको सम्झौतालाई न संघका कोषाध्यक कुँवरले अनुशरण गरे, न संघले नै कार्यान्वयन गर्यो। यसपछि पनि संघका कोषाध्यक्ष आफ्नो पद र गुण्डागर्दीको पावर देखाउदै नेपालीहरुमाथिको ठगीको शृखंला र गुण्डागर्दी रोकेनन्। उता संघले पनि उनको निरन्तर बचाउ गर्दै गयो।
लक्ष्मी ट्राभल्स मार्फत २ महिना अगाडिदेखि नेपाल जाने टिकेट काटेर आफ्नो लगेजसहित आज बिहान विमानस्थल पुगेका ११ जना नेपाली यात्रुहरुले बोर्डिङ पासका लागि टर्किस एयरको काउन्टरमा पुग्दा उनीहरुलाई टिकट नक्कली भएको भन्दै फर्काइएपछि संघका कोषाध्यक्ष कुँवरको ठगी धन्दाले फेरी पोर्चुगलको बजार ततायो। विमानस्थलबाट फर्काइएका ११ जनाले प्रति व्यक्ति ६२० युरोका दरले टर्किस एयरलाइन्सको टिकट काटेका थिए। उनीहरुमध्ये कयौले सोही ट्राभल्स मार्फत नेपाल पैसा पनि पठाएका थिए। उनीहरुले नेपाल पठाएको पैसा समेत भुक्तानी भएको छैन।
विमानस्थलबाट फर्काईएका पिडित यात्रुहरु लक्ष्मी ट्राभल्सको कार्यालयमा आफ्नो लगेज सहित पुगेर संचालक कुँवरलाई कार्यालयमा कुराकानी गर्न कयौ पटक अनुरोध गर्दा पनि उनी आएनन्। पिडितहरुले भोइस अफ नेपाल संगको कुराकानीमा भने , ” युरोपमा पनि नेपालीहरुले कसरि ठग्न सकेका होलान ? अझै एनआरएनए नेताले नै नेपालीलाई ठगेपछि हामी जस्तो श्रमिक नेपालीहरुले कसको बिश्वास गर्ने ? ”
अर्का पिडितले भने , ” बर्षौपछि हामी नेपाल जाने भएकाले हाम्रो मान्छे उत्साहित भएर गाउबाट हामीलाई लिन काठमाडौँ आइसके, हामी नक्कली टिकेट भएका कारण एयरपोर्टबाट फर्किनु पर्यो। अब के भन्ने, पैसा पनि साथमा धेरै छैन, अब कता गएर बस्ने, के खाने ? ”
संघका कोषाध्यक्ष बिक्रम जंग कुँवरको नेपालीहरुमाथिको ठगी शृंखला र गुण्डागर्दी नरोकिएपछि आज ५ अप्रिल, २०२१ बाट निज कुँवरलाई संघले कोषाध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरेको हो।
संघका पदाधिकारीहरु बारम्बार असामाजिक क्रियाकालापमा संलग्न भएर संघको गरिमामा आँच आउने कार्य गरेपछि संघको ५ अक्टोबर २०२० मा बसेको बैठकले यस समितिका पदाधिकारीबाट कहि कतै संस्थाको हित बिपरित, समाजमा नकरात्मक वातावरण श्रृजना गर्ने, गराउने र भ्रम श्रृजना गरेमा सोतह जो कोहिलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।